Vector Online Learning Articles • Myanmar Bestelearning
Vector Online Learning Articles | ဆောင်းပါးများကို အခမဲ့ဖတ်ရှုလေ့လာရန်
Follow our Vector Online Learning Articles
Vector Online Learning Article
လှပသေသပ်တဲ့ Website တစ်ခုကို ၂ ရက်အတွင်း အလွယ်တကူ ဖန်တီး ရေးဆွဲတတ်လိုပါသလား? Website Building
After Effect မှာအဖြစ်များတဲ့ Ray-traced 3D Deprecated Error ဖြေရှင်းနည်း
After Effect မှာအဖြစ်များတဲ့ Ray-traced 3D Deprecated Error ဖြေရှင်းနည်းလေးကို ဒီ Video လေးနဲ့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဘာကြောင့် WordPress ကို အသုံးပြုသင့်သလဲ?
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုကို လျှင်မြန်စွာဖန်တီးပေးနိုင်သလို မိမိရဲ့စိတ်ကူး၊ အိုင်ဒီယာတွေကို စိတ်တိုင်းကျ ပုံဖော်ပေးနိုင်စွမ်းလည်းရှိတဲ့ WordPress ကိုဘယ်သူတွေက ဘယ်နေရာမှာ အသုံးပြုကြသလဲဆိုတာလေးကို အောက်ပါ Video လေးမှာ ဝင်ရောက်လေ့လာ လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ!
(၇၂)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ ကို ကြိုဆိုခြင်း
မတူကွဲပြားမှုများစွာထဲက တူညီမှုလေးတွေနဲ့အတူ စုစည်းပြီး အတူတကွ ရပ်တည်ရှင်သန်ကြရင်း ဘဝအဓိပ္ပာယ်တွေကို ကိုယ်နားလည်သလိုဖွင့်ဆိုကြရင်း အေးချမ်းသာယာပြီး ကြွယ်ဝပြည့်စုံသော အနာဂါတ်ဘဝလေးတွေဆီကို
မည်သူမှ မွေးကတည်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့်မပါ ကြပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိဖို့ဆိုတာ မိမိကိုယ်တိုင် တည်ဆောက် ရယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းတဲ့အခါ မိမိကိုယ်ကို သိမ်ငယ်တာမျိုး၊ ကိုယ်လုပ်လိုက်ရင် မှားများ မှားသွားမလားဆိုတဲ့ တွေဝေဒွိဟ စိတ်တွေကိုလည်း တိုးပွားစေပါတယ်။
အခမဲ့ သုံးစွဲနိုင်သော အကောင်းဆုံး WordPress Themes (5)ခု
ကမ္ဘာပေါ်မှာ WordPress CMS ကို အသုံးပြုထားတဲ့ ဝဘ်က်ဆိုဒ်တွေဟာ ၃၃ ရာခိုင်နှုန်း ရှိတယ်လို့ W3Techs ရဲ့ စစ်တမ်းတွေမှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
5 Year Ago See Your Memories တဲ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်တုန်းက
တကယ့်ပျော်ရွှင်မှု့ဆိုတာဟာ လောကကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြောင်းတရားတွေ အပေါ် ကိုယ်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလဲဆိုတာနဲ့တိုင်းတာပါတယ်။
မိမိ Browser မှ ဘယ်ကမှန်းမသိပဲ ခဏခဏလာပေါ်နေတဲ့ ကြော်ငြာများကိုဖျောက်နည်း
ဒီတစ်ခေါက် Tutorials လေးမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ Browser တွေမှာ ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ ကြော်ငြာတွေ ခဏခဏလာပေါ်နေတာလေးကို ဘယ်လိုရှင်းရသလဲဆိုတာလေးကို တင်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
YouTube မှာရှိတဲ့ အတွဲလိုက်ဗီဒီယိုဖိုင် ပေါင်း 40 ကျော် 50 ကို တစ်ပြိုင်တည်း အလွယ်တကူ Download ဆွဲနည်း
Colour Theory နဲ့ ကမ္ဘာလောကကြီးကို ချယ်မှုန်းထားပုံ
အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝတုန်းက ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးချိန်တွေမှာ ပန်းချီပညာသင်ခဲ့ရဖူးတယ်။ ဝါ၊နီ၊ပြာ ဆိုတဲ့ အရောင်သုံးရောင် ကို အမျိုးမျိုးပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ အရောင်တွေကို
Electronic Mail နဲ့ ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ
YouTube Videos တွေမှာ ကြော်ငြာလက်ခံနည်း
VECTOR Online Learning Platform တွင် သင်ခန်းစာများလေ့လာနည်း
ဒီဆောင်းပါးလေးမှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Plan တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ အလုပ်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတာလေးကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လှပသေသပ်တဲ့ Website တစ်ခုကို ၂ ရက်အတွင်း
မတူကွဲပြားမှုများစွာထဲက တူညီမှုလေးတွေနဲ့အတူ စုစည်းပြီး အတူတကွ ရပ်တည်ရှင်သန်ကြရင်း
5 Year Ago See Your
အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝတုန်းက ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးချိန်တွေမှာ ပန်းချီပညာသင်ခဲ့ရဖူးတယ်။ ဝါ၊နီ၊ပြာ ဆိုတဲ့